Yantai Sanniu Ngenisa & Export Co., Ltd.
I-Yantai Sanniu Import & Export Co.I-Ltd ingumenzeli oqeqeshiwe wokudla neziphuzo kanye nenkampani yokupakisha engaphezu kweminyaka eyi-10.
Ukuze ube yi-ejenti ehamba phambili nethembeke kakhulu embonini
Nikeza ukudla okulula kakhulu futhi okumnandi.
Dala inani elengeziwe kumakhasimende nakubaphakeli, isimo sokuwina.
I-Yantai Sanniu Import & Export Co, Ltd ingumenzeli oqeqeshiwe wokudla neziphuzo nenkampani yokupakisha engaphezu kweminyaka eyi-10. Sakhe ubudlelwano obuqinile nezimboni eziningi nabakhiqizi kulo lonke elaseChina.
Sigxile ekuthumeleni nasekusabalaliseni ukudla okuhlukahlukene kwamaShayina ezimakethe ezijwayelekile zomhlaba wonke ukuhlangabezana nezinto ezithandwa njalo ezishintshwayo zezimakethe zanamuhla. Sinemikhiqizo yethu enophawu futhi sisiza izinkampani zokudla zasekhaya ezincane neziphakathi ukwenza ukuhweba kwamanye amazwe. Njengamanje, sesithole amalungelo wokuhweba akhethekile wokuthekelisa wemikhiqizo nemikhiqizo eminingi. Isisekelo samakhasimende ethu sifaka phakathi, kepha asikhawulwanga kubathengisi baphesheya kwezilwandle, izitolo ezinkulu, abasabalalisi, abathengisa nge-e-commerce, izimakethe ezidayisa yonke impahla, izitolo zama-club kanye nezitolo ezilula. Umsebenzi wethu ukuhlanganisa nokuthumela imikhiqizo eyiqiniso yaseChina. Uhla lwethu lomkhiqizo lufaka kepha alukhawuleli ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokudla okulula, ukudla okusheshayo, kanye nezidingo zansuku zonke, njengamabhisikidi namakhukhi, izipisi zamazambane, izithelo ezakhiwe
Ukuncika kumlando wethu webhizinisi nohlelo lwensizakalo esezingeni eliphakeme, sizokunikeza ukudla okuseqophelweni eliphezulu nokuncintisana. Siyakwazi ukuphendula izidingo eziyinkimbinkimbi futhi silethe izixazululo zokuthengwa kwempahla ngesikhathi esifushane. Isevisi ye-OEM / ODM iyatholakala kumakhasimende.
Isekelwe eYantai, ebheke emhlabeni wonke, ngokubambisana sizosebenzisa leli thuba, futhi sakhe ukubambisana kokuwina. Wamukelekile abangane abavela kuzo zonke izizinda zokuphila ukuze basivakashele kanye nezingxoxo zebhizinisi. Ngibheke phambili ekubeni ngomunye wabalingani bakho bebhizinisi abahle kakhulu.
Sazise ukuthi yini oyidingayo nezidingo, njengomhwebi osebenza kahle futhi onokwethenjelwa, sinesibopho sokwenza konke okusemandleni ukuhlangabezana nezidingo zakho.
Amaphakethe Esoso Soy, Ikhukhi leLadyfinger, Ukudla Amakinati Anosawoti, I-Hawthorn Strip, Izingane Amabhisikidi, Induku entsha ye-Bean Curd,